Imibuzo evame ukubuzwa - Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Yebo, sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nenani elincane le-oda. Uma ubheka kumanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uxhumane nathi.
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuvumelana; Umshuwalense; Umsuka, neminye imibhalo yokuthumela ngaphandle lokho okudingekayo.
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ngokukhiqizwa ngobuningi, isikhathi sokuhola yizinsuku eziyi-7-21 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Ungenza inkokhelo ku-akhawunti yethu yasebhange nge-T / T, idiphozi engu-30% kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngokuqhathaniswa nekhophi ye-B / L, noma i-L / C lapho ubona.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Ukupakisha okunguchwepheshe kanye nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kubangele inkokhelo eyengeziwe.